Tafaray Ao Shahbag Ny Bangladesy Noho Ny Faha- 42 Taonan’ny Heloka An’ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2013 15:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, 한국어, Français, Swahili, Català, বাংলা
Tsikelikely, nanjary ranomasimben'ny olona ny fiolanana Shahbag ao andrenivohitry Bangladesh, ao Dhaka, ho fitakiana ny rariny noho ireo habibiana niseho nandritra ny tolom-panafahana tamin'ny taona 1971 sy ho fitakiana ny fanasaziana ho faty ireo meloka an'ady.
Araka ny filazan'ny sasany, tombanana ho 500.000 tsy latsaka eo no isan'ireo olona tonga ao Shahbag.
Folo andro lasa izay, niantso ireo mpanao fihetsiketsehana ny Tambajotra Bilaogera sy Mpikatroka Antserasera (BOAN) rehefa fantatra fa meloka tamin'ny heloka an'ady niseho tamin'ny 1971 i Abdul Quader Mollah, Sekretera Jeneralin'ny antoko Islamista Bangladesh Jamaat-e-Islami. Tamin'ny 5 Febroary 2013, sazy an-tranomaizina mandrapaha-faty no didy navoakan'ny Fitsarana Iraisam-pirenena Misahana ny Heloka Bevava ho azy noho ny famonoana olona 344, ny fanolanana sy ny fandoroana vitany
Hatramin'ny nankatòavana ny lalàna fanamelohana ho faty momba ny heloka bevava ao Bangladesh, maro ireo vahoaka no nanantena fa ho ahaton-doha i Quader Mollah. Kanefa mbola tsy tanteraka izany ary nidina an-dalambe sy nankao amin'ny Facebook ny vahoaka.
Ranomasimben'ny olona ao Shahbagh. Sary: Firoz Ahmed. Copyright Demotix (11/2/2013)
Manantena ny fahombiazan'ny hetsika Shahbab ilay poety malaza sady mpampianatra eny amin'ny Oniveristen'i Jahangirnagar, Khaled Hossain. Hoy izy nanoratra tao amin'ny rindrin'ny Facebook-ny:
Tsy avy amin'ny fitiavam-bola na fitadiavana tombotsoa izao fahatsapan-tena izao. Vokatra tsara avy amin'ny fiheverena ny lafy tsara iombonana izao. Tsy mahazo na inona na inona afa-tsy fandresena ihany isika.
Bilaogera, mpanoratra sady mpampianatra Moom Rahaman nanentana ny tsirairay hoavy hamonjy ny fiolanana Shahbag:
Ho an'ireo tanora ao an-tanàna ka tsy afaka hamonjy ny hetsika Shahbag, fantaro azafady fa mbola ho lavitry ny tantara ianao, mbola lavitry ny ankehitriny sy ny hoavy. Kanefa, mbola manana fotoana hiarahana aminay ianao. Koa ho an'ireo tanora, fotoana ahatongavana ao Shahbag izao.
Tausif Hamim, tanora miari-tory mba haneho firaisankina amin'ny hetsika. Vaskar Abedin nizara momba ny fanaon'i Hamim:
In-telo isan'andro aho no tonga ao Shahbag, miventso teny filamatra, ka rehefa reraka aho, dia misafo loha, mijery ny manodidina, mahita am-pahagagana fa nanjary fanantonan-kafatra ireo andrin-jiro. Mihantona eo amin'izany andrin-jiro izany ohatra ny sarin'i Quader Mollah. Nianatra voambolana vaovao aho – S hoan'i Saka Chowdhury, Razakar ianao, G ho an'i Golam Azam, Razakar ianao. Rehefa noana aho, dia mody any an-trano, misakafo hariva ary miverina ao Shahbag indray. Tonga ny hariva, nanjary nihamafy ny teny filamatra fitakiana ny fanantonan-doha, miha-maizina ny andro ary mamofona fahamaizana ireo fanilo mirehitra. Angoniko avokoa ireo fanilo nampiasaina, mandreraka be ny mametraka taratasy manerana ny kerozena naparitaka (solitany mbola tsy voadio tanteraka), ka rehefa reraka aho dia mihinana voanjo ary mandoro ny akoram-boanjo amin'ny labozia mirehitra .
Lucky Akter miventso teny filamatra. Sary: Firoz Ahmed. Copyright Demotix (11/2/2013)
Nisy tamin'ireo fahitalavitra tsy miankina no nandefa sy nitantara ny fandehan'ity fihetsiketsehana ity. Noho izany fandaharana izany, nanjary nalaza i Lucky Akter, mpitarika ny hetsika tamin'ny teny filamatrany mahery vaika. Britanika-Bangladesy Morshed Akhter nanoratra hoe:
Nanomboka androany, rahavaviko i Lucky Akter. Ary nanomboka tamin'izany, nanjary rahavavin'ny rehetra i Lucky Akters, “nahatonga azy nalaza”. Fitiavana be dia be ho anao.
Shimul Bashar, mpampita-vaovao avy amin'ny fahilavitra tsy miankina manana fanantenana ny amin'ny hetsika #Shahbag:
Averiko indray fa anisan'ny hipetraka ho tantara ireo andron'ny Shahbag. Tsy manana zava-dehibe ankoatra ity aho eo amin'ny fianako. Mama, tsy mahita tory aho. Mahatsiaro an'i Shahbag foana aho. Tsaroako avokoa ireo endrika rehetra.
Nanohana ny hetsika avokoa ireo vahoaka maro be saingy mbola tsy naneho ny heviny kosa ilay nahazo ny loka Nobel, Dr. Muhammad Yunus. I Azad Master nanamarika hoe:
Tonga namonjy ny hetsika niaraka tamin'ny vadiny ilay Nahazo Nobel Dr. Zafar Iqbal mba hiventso teny filamatra. Saingy mbola tsy naneho ny heviny indray ilay nahazo ny loka Nobel Dr. Yunus tamin'ity .
Mpianatra nanao fihetsiketsehana. Sary: Zakir Hossain Chowdhury. Copyright Demotix (11/2/2013)
Saikat Shuvro Aic nanontany ny Antoko Nasionalista Bangladesh (antokon'ny mpanohitra lehibe indrindra)- mikasika ny fijeriny ny fihetsiketsehana:
BNP! mba manan-kolazaina sy fijery ve ianao! Andriamanitra ô, vonjeo ity antoko ity.
Maro ireo mihevitra fa tohanan'ny fitondrana ity fihetsiketsehana ity. Ny hafa kosa mihevitra fa mampiseho ny tsy fahombiazan'ny governemanta ity. Saingy tsy nitovy hevitra tamin'izany i Bijoy Mazumdar:
Amin'ny politika, tsy misy toerana tokony tsy ahafantarana ny hetahetam-bahoaka. Ho an'ny vahoaka ny politikam-bahoaka. Manohitra ny tsy rariny, ny famaizana ary ny fampijaliana ny politikam-bahoaka. Tsy mikendry hanana fahefana ny politikam-bahoaka, fa ny hanafaka ny fahefana amin'ny kolikoly. Tsy ny hampatanjaka antoko politika no tanjon'ireo mpanao fihetsiketsehana ao Shahbag. Ny hampanjaka ny rariny no hitoloman'izy ireo.
Mampiseho ny fahatsapan-tenan'ireo tanora ankehitriny ity fihetsiketsehana ity [..]
Mihevitra ny sasany fa fandrika ho an'ny antokon'ny fitondrana ity fihetsiketsehana ity mba hanafenana ny tsy fahombiazan'izy ireo amin'ny sehatra maro samihafa.
Hafa ny valinteniko.
Ho an'ireo izay mitambatra sy mitaky ny rariny manoloana ny heloka bevava 42 taona lasa izay, indray andro any, hanandram-peo hanohitra ireo izay mbola mifikitra amin'ny aretina kolikoly ireo vahoaka marobe ireo.
Vahoaka marobe nampiaka-peo tamin'ny taona 1971 ihany ireo vahoaka ireo izay nitolona ho amin'ny fahafahantsika. Amin'izao 2013 izao, ireo vahoaka marobe ireo ihany no nirohotra hitaky tanjona samihafa, ho an'ny rariny.
Hira, tononkalo ary hatsikana no foronina Isan'andro. Nitondra ny fanohanany tamin'ny hetsika #Shabbag ihany koa ilay mpihira malaza sy mpikambana ao amin'ny Parlemanta Bengaly Tandrefana, India, Kabir Suman tamin'ny famoronan-kira tahaka ny hoe “fitakian'ny maro” sy ny “ny alina tontolo ao Shahbag.”
Isan'andro, kaonty Facebook vaovao no nosokafana na manohana na manohitra ny hetsika. Anisan'ireo manohana ny hetsika ohatra ny Hetsika Shahbag (Shahbag Movement) sy ny Kianjan'i Projonmo (Projonmo Square) ary anisan'ireo manohitra kosa ny Feon'ny Nasionalista (Voice of Nationalist) sy ny Bamboo Castle.
Nampanantena ireo mpanao fihetsiketsehana fa hobodo ny Shahbag mandra-pivaly ny fitakian'izy ireo.